Anjely Mainty Anosy : Rava ny tambazotra mpanaparitaka vola sandoka -
AccueilSongandinaAnjely Mainty Anosy : Rava ny tambazotra mpanaparitaka vola sandoka
Anjely Mainty Anosy : Rava ny tambazotra mpanaparitaka vola sandoka
Ravan’ny zandary ny 23 aogositra lasa teo, teny amin’ny Anjely Mainty Anosy sy teny Ankadimbahoaka ny tambazotra matanjaka mpanaparitaka vola sandoka eto Antananarivo. Rehefa nahazo fampilazam-baovao avy amin’ny olona tsara sitrapo ny mpitandro filaminana, ny amina fisiana andian’olona manaparitaka ireo vola tsy izy ireo dia niditra an-tsehatra avy hatrany tamin’ny fisamborana. Teny amin’ireo toerana voalaza ireo no tra-tehaka ny olona enina, izay nahitana vehivavy . Nisy ny fisavana ny trano, taorian’ny nahatrarana azy enina mianadahy ireto, ka tamin’izany no nahitana ireo vola sandoka iray alina vaovao, mitentina 03 tapitrisa ariary, sy vola iray alina teo aloha, izay mitotaly 1.500.000 ariary. Araka ny nambaran’ny teo anivon’ny zandarimariam-pirenena, taorian’ny fanadihadiana izay nataon’izy ireo , dia fantatra fa tambazotra voakarama hanaparitaka ireo vola sandoka iray alina be dia be ireo izy enina mianadahy ireto. “Amidin’izy ireo 3000ariary ny iray amin’ireo iray alina ireo, ary eny amin’ny Anjely mainty no toerana hivarotan’izy ireo izany. Efa miparitaka be eto Antananarivo ireo vola ireo amin’izao fotoana izao, ka tokony hitandrina ny rehetra”, hoy ny fanampim-panazavana voaray.
Mbola eo an-dalam-pikarohana ny tompon’ny fitaovana nampiasaina sy ny atidoha nikotrika, tamin’ny fanaovana ireo vola tsy izy ireo, ny manam-pahefana amin’izao fotoana izao. Araka ny nambaran’ny teo anivon’ny zandarimariam-pirenena ihany dia mora fantarina ilay iray alina hosoka tamin’ny vola teo aloha noho izy hita matromatroka. Raha jerena tampoka kosa, dia mitovy tsy misy valaka amin’ny tena izy ilay vola sandoka iray alina vaovao, saingy rehefa tena dinihina tsara dia tsikaritra ho tsy misy ilay mangirana mampiavaka azy, io vola io. Tany Sambava moa no niantombohan’ny fiparitahan’ireo vola vaovao tsy izy ireo, iray volana latsaka taorian’ny nivoahany, ary izao efa tonga eto Antananarivo izao. Vao tamin’iny herinandro iny ihany koa no nisy dimy lahy sarona nitahiry sy nampiasa izany tany Mananjary. Efa maro no voasambotra sy nampidirina am-ponja amin’ny fanaovana ity asa ratsy ity, saingy heverina fa tsy ho foana mihitsy izany, raha tsy ireo mpamatsy sy lohandohan’ny mpisorona amin’ny fanamboarana izany, no mihidy any an-tranomaizina. Marihina fa tsy misy rohim-pihavanana izy enina mianadahy ireto, fa mpiray tombon’antoka amin’ny fanatanteraha ity asa ratsy ity. Efa natolotra ny fampanoavana tamin’ny sabotsy lasa teo izy ireo, ka ny telo izay nahitana ilay vehivavy, dia nadoboka am-ponja vonjimaika avy hatrany. Nahazo fahafahana vonjimaika kosa ireo telolahy ambiny.
Notanterahina omaly, tetsy amin’ny kianja mitafon’Ankorondrano, ny fivoriana niarahan’ny antoko Hery Vaovaon’i Madagasikara eto Analamanga, na ny HVM Analamanga tamin’ireo sefo fokontany miisa 192 avy amin’ireo boriborintany enina. Fivoriana niavaka mialohan’ny fiatrehana ny fety satria ...Tohiny